Nyamavhuvhu 3, 2011 pa 2:00 ndiri
Havana kuziva kusvikira maawa pashure updating ndingada ndanga 404'ing rakashandurwa mapeji. Need hwokugadza kuti APC thingy. Asi ini ndine W3 Total cache achimhanya, uyu haana kunaka sezvo Super cache?
Thanks sezvo nguva dzose.
Nyamavhuvhu 3, 2011 pa 2:09 ndiri
Ini handigoni kuona chero chikonzero nei shanduro itsva wakaramba 404 chinhu, ipapo handina kuchinja kuti aifanira pave chinhu munzvimbo.
Kugadzwa APC kuchaita waivako zvikuru zvakanaka, asi ichi ndicho chete yambiro, uye kana maitiro ako zvakanaka pamberi, haufaniri kuisa nayo (unogona nguva dzose kubvisa yambiro)
maererano W3 zvachose cache, inofanira kushanda, Zvisinei transposh kumbobvira akawedzera kusangana nawo (Somuenzaniso cache peji invalidation pamusoro kuchinja rokushandura) pamwe pane zvimwe ramangwana.
Nyamavhuvhu 3, 2011 pa 2:33 ndiri
Ndezviya waipedza uye apiwa abling W3 Total cache unocherekedza ari 404 dambudziko, yakatanga apo ini yoku- Transposh ichi mangwanani.
Problem akagadzirisa, nguva yokurara! Tinotenda kuti mhinduro yako.
Nyamavhuvhu 3, 2011 pa 7:08 ndiri
No 404 asi here kushanda? Tapota bvunza wako panzvimbo zvakare
Nyamavhuvhu 3, 2011 pa 12:05 pm
Yout w3tc chinyorwa minimizer inoita transposh hazvishandi, unofanira kubvisa transposh.js kubva minimization, Ndichaudza pamwe vanofanira kutarira kuti
Nyamavhuvhu 3, 2011 pa 2:57 ndiri
Updata tsva chiono, akacherechedza “Isu havana kuwana kunotsigirwa-ndangariro caching injini, nekuisa mumwe anogona kuvandudza mashandiro. ” Chii chakaipa naro? Sei mune 0.7.5 ndizvo OK?
Nyamavhuvhu 3, 2011 pa 7:09 ndiri
0.7.5 akanga nyaya chete, asi akanga asingagoni kukuzivisai nezvazvo, iri chikamu chii chaizvoizvo itsva 0.7.6 – kukuudzai kuti nekuisa “kunotsigirwa-ndangariro caching injini” akadai APC zvamazvirokwazvo pfungwa yakanaka kwazvo nokuda Transposh
Nyamavhuvhu 8, 2011 pa 2:35 pm
Tatenda pluge yenyu. Zvinokwanisika Wakacherechedza Country Name sezvo Chirungu Language. Handina kuziva chaiyo zita munyika dzakadaro Version.
Nyamavhuvhu 15, 2011 pa 12:16 pm
Thanks zvitsva shanduro plugin! Zvaizova zvakanaka kuita kushandura nyaya yose kubva arun Panel, zvingava kuponesa nguva yakawanda yokuti vanoshandisa.
Nyamavhuvhu 15, 2011 pa 12:43 pm
Ichi chinhu ticharamba kushandira…
Gunyana 3, 2011 pa 2:47 ndiri
In musoro wangu faira Ndinoshandisa kutevera vaviri mhando kuwana Tile:
<meta name="title" kugutsikana ="
<meta name="description" kugutsikana ="
rokuremekedza anogona kuwana rakashandurwa Tile, asi rondedzero chete kuwana pakutanga mumwe.. Ndoita sei? Ndatenda?
Gunyana 6, 2011 pa 3:22 ndiri
Ndinokutendai plugin dzenyu huru.
kukuudzai kuti nekuisa "vaitsigira-ndangariro caching injini" akadai APC zvamazvirokwazvo pfungwa yakanaka kwazvo nokuda Transposh.
Ko APC zvinorevei?
Sei kuisa nayo.
Sorry kuti ndinoziva zvakare shoma, hehe!
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwenyu kunobatsira!
Gunyana 20, 2011 pa 11:35 pm
Sorry nokuti haana pakupindura ambotaurwa, ichi inongova yambiro, kubvumira Webmasters kuvandudza nzvimbo waivako, APC iri yemhando PHP cache, uye iwe unogona Google kuti peya-apc uye kuwana zvose zvauchasarudza uchida, Transposh plugin anorishandisa kuvandudza mashandiro uye torega db queries apo kwayo kwakaita
Gunyana 20, 2011 pa 5:19 pm
ChaAdryana kuti zvingangoitika kushandisa Widget mu nzira Widget dziri kuwedzera chikuru Widget munzvimbo. With WordPress Theme Twentyten mwana ndine chikuru, yechipiri uye nzira Widget munzvimbo – nedzimwe templates Page uchishandisa chete nzira Widget munzvimbo. Asi kamwe ari Widget kwave aiswe chikuru Widget, Handikwanisi uyewo kune dzimwe Widget nharaunda. : (
Gunyana 20, 2011 pa 11:24 pm
Ndinobvumirana, ichi chinhu chinowanika kuti tinofanira kuva kuwedzera mune ramangwana.
Gunyana 21, 2011 pa 5:35 pm
Nzvimbo iyi iri yakagovana Hosting uye handina chokwadi kana zvichiita kuti kushandisa numéro-bumbiro uye Ndakacherechedza kubva ichi ichangoburwa update kuti Transposh Kutaura “In-ndangariro caching injini akasawanikwa” uye dzimwe shanduro zvino patchy chaizvo. Hapana imwe nzira kune kushandisa APC kana Memcached kuti vanhu vasingagoni gadza navo?
Gunyana 21, 2011 pa 6:08 pm
Uyu ziviso, izvo zvinogona kubviswa zvachose vachisundira X iri akagoverana nemitambo hapana kuita asi kukumbira Provider chako kuisa chimwe emamwe, hapana ndicho zvakawanda zvatingaita isu kuti
Donald Shane anoti
Gunyana 22, 2011 pa 1:29 ndiri
Ndakaona zvazvakaipira pamwe HOSTGATOR, peya-apc inowanika chete VPS uye vakazvitsaurira servers. Hapana chokuita Pamwe nemitambo. Vanotii yokugadza WP Super cache. Ko WP Super cache Plugin rinobatsira Transposh plugin?
Mbudzi 11, 2011 pa 1:12 ndiri
Ehe, zviri zvikuru kubatsira, siyana nzvimbo caching asi kunoitawo kuvandudzika
Gunyana 26, 2011 pa 5:42 pm
Pakupedzisira, Ndaisa pachangu kuburikidza marwadzo mechidziro ndokubvunza nehondo arun yokugadza APC, zvaaiita asina paine kupikisana kwakadaro, uye ikozvino kwete chete Transposh asi yose nzvimbo iri kumhanya sezvinoita “vakabayiwa gonzo”… chakanakisisa! Zvinonyatsorehwa nani nzvimbo yacho peji yokutanga mutoro-nguva kubva APC rakanyatsojeka kuyevedza pakuti rava kutsanya. Zviri ikozvino pasi kubva 2.7 masekondi kuti 1.3 masekondi. Uye Transposh ari kuita zvayo zvakaisvonaka basa dzose uye kuridza ayo mugove kuti, kwete kunonoka peji mitoro zvose, saka ndimi sezvakanga kutsanya sezvo Chirungu default. Kutenda kuzhinji.
Gunyana 29, 2011 pa 6:36 ndiri
Ndingaita sei kunogona kuwedzera “nofollow” kuti kubatana kuti mutauro ose..
Gumiguru 11, 2011 pa 11:43 pm
Unofanira kushandura bumbiro remitemo kuti zvinowanisa ari Links, achiwedzera nofollow ikoko, basa iri riri utils.php
Gumiguru 3, 2011 pa 6:34 pm
Ndine hurombo, asi Bing mushanduri inoratidzika NOT kushanda transposh plugin
Gumiguru 11, 2011 pa 11:44 pm
It inoshanda uye kure sezvo ivo vakawedzera mamwe kota zvausingakwanisi, unofanira kuwana ako AppID uye kutsiva uya rinowanika mukati bumbiro wedu ichi kushanda flowlessly
Gumiguru 12, 2011 pa 12:48 pm
Uye apo bumbiro ndikaisa?
Gumiguru 9, 2011 pa 5:06 pm
Mhoro, nemhaka iyi plugin zvinoshamisa, anoshanda zvikuru, asi ndine mubvunzo mumwe:
My WP uye TP default mutauro wechiSpanish, pamwe shanduro Chirungu uye german kushanda nemicheka. kana (semuyenzaniso) munhu German rokushandisa namagwatidziro mu German, uye ini ufambe shure Default chiSpanish, pambiru anoita kuti kushandurwa.
Asi ini sezvisipo kukwanisa manually kuchinja otomatiki shanduro mumutauro default.
eg. http://mysite.com/my-post?edit=1 asingagari chindizivisai shanduro mifananidzo (girinhi, dombo shora, pingi)
http://mysite.com/de/my-post?edit=1 tigokuzivisai transposh mifananidzo.
Zvinoita kuongorora shanduro otomatiki mumutauro default?
Tinotenda kuti pfungwa dzako!
Gumiguru 11, 2011 pa 11:46 pm
Mhinduro ndeyokuti hungu, kana kushandura mumutauro default anogoneswa unofanira kukwanisa aongorore shanduro, unogona mumuedze nayo pano panzvimbo iyi (Sezvo vamwe nemashoko akanga re mumitauro)
Gumiguru 12, 2011 pa 1:11 ndiri
ngaavongwe zvakawanda nokuwana nguva kupindura!
Ini ndiri chete kukwanisa aongorore shanduro kuti mutauro default, ndingaita tarisa kuti zvifambe?
(The otomatiki shanduro eg. kubva DE kuti Default ES mabasa asi ane chinosemesa mugumisiro)
Gumiguru 13, 2011 pa 5:21 pm
Ndakaona kuti vamwe chikonzero haana yakajeka kwandiri, dzangu panzvimbo yacho "mashoko-srclang" chizenga kuti TP span Tag chinoshayikwa. semuenzaniso. pamusoro wangu yepaIndaneti:
<span id="tr_169" class="tr_" data-orig="Geschirrspülmaschine" date-mabviro ="0" data-token="R2VzY2hpcnJzcMO8bG1hc2NoaW5lIHZvbiBXaGlybHBvb2w,">Dishwasher</span>
hunofananidzwa Spanish nezvemutsara nzvimbo iyi
<span id="tr_3" class="tr_" data-orig="¿Y en que parte del código lo pongo" data-srclang="es" date-mabviro ="0" data-token="wr9ZIGVuIHF1ZSBwYXJ0ZSBkZWwgY8OzZGlnbyBsbyBwb25nbw,,">uye, chii chikamu bumbiro ndinofanira kuriisa</span>
Zvisinei pambiru yangu yepaIndaneti ane tp_language pambiru Meta / tsika munda kurondedzerwa se "de".
Mbudzi 11, 2011 pa 12:16 ndiri
Izvi wakasika kubudikidza plugin kamwe mhinduro akasikwa ari kupiwa mutauro inowanikwa, tinofanira vakwanise kusarudza tikaisa mutauro mashoko ari backend mushanduro ramangwana.
Gumiguru 11, 2011 pa 3:34 ndiri
tinopa & Terence,
Ini ndakagadza wokupedzisira Transposh shanduro 0.7.6, uye vamwe zvikanganiso:
– mazita All haishandurike
– Content uye dzimwe nhengo (menu ..) dzimwe nguva anoshandurwa , dzimwe nguva hazvisi.
– tsananguro & Keywords haishandurike vo.
– Pandaiva baya kuti Transposh anoiswa, zvinoratidzika: “Isu havana kuwana kunotsigirwa-ndangariro caching injini, nekuisa mumwe anogona kuvandudza mashandiro. Check Transposh FAQs” . Chii chanetsa? Ndiri kushandisa W3 Total cache plugin nokuda caching.
ikozvino, sei chandingaita?
Bvisai W3 Total cache uye dzishandise APC?
Gadza vakura Transposh VERSION?
Kana dzimwe nzira?
Ndapota ndibatsirei kugadzirisa ichi dambudziko danho nedanho!
Gumiguru 11, 2011 pa 11:49 pm
Nyevero chaizvo kuti, nyevero, unogona zvakachengeteka kuiteerera, kana kuverenga uye kuita pamusoro, regai kubvisa W3TC, gadza APC kana memcached kana uchigona, regai vanodira…
Ndicho rubatsiro ndinogona kukupa pamwe mashoko iwe akapa, rombo rakanaka
Gumiguru 11, 2011 pa 7:44 ndiri
Ndinoshandisa plugin ichi kubva 1 makore.
kududzira rurege somuenzaniso mu 2 wechipiri kubva 2 mazuva, kana ndikatuma wenyaya yangu kana kuvhura nzvimbo yangu. Ini muss mira 5 miniti uye kushandura zvimwe chinyorwa chinyarara zvakare uye Ndinodzokorora nayo
kuonekwa akafanana kushandura Google API kutora spam IP yangu kana plugin API akura zvino?
unogona kutarisa kuti pls?
Gumiguru 11, 2011 pa 11:51 pm
gadza firebug, kana kushandisa Chrome Dev Ezvemutauro, kutarisa paIndaneti Tab uye unogona kuona kana IP rako makavhara, Ini zvechokwadi haagoni kuongorora kana IP yako makavhara…
Mbudzi 1, 2011 pa 12:38 pm
Handizivi sei, Transposh asi haachatyi rinoshanda yangu yepaIndaneti… Zvokuita? kuvonga Cristina
Mbudzi 10, 2011 pa 11:34 pm
Sorry pamusoro mukupera mhinduro, ndapota kutsiva kwenyu transposh.js faira rimwe kubva panzvimbo ino http://transposh.org/wp-content/plugins/transposh/js/transposh.js
Shanduro itsva huchagadzirisa ichi nokukurumidza pamwe sezvinongoita update
Mbudzi 15, 2011 pa 11:23 ndiri
…zvose zvakanaka ikozvino, kuvonga.
…achiri chokwadi kuti mune dzimwe nzvimbo yacho (sezvo mumba Widget) ari [TP no_translate ="uye"][/TP] Zvikasashanda!
Claudio nematende anoti
Mbudzi 4, 2011 pa 7:49 pm
havachafaniri anoshanda neni eather… Ini akatoedza zvinomuomera kuikanganwa shanduro zvose zvokuzvisarudzira.. asi kuti wasen't zvakakwana…
saka ini dzadzimwa chero SQL pamatafura chokuita transposh uye kudzorerwa.. asi hapana.
Kana Ndinoedza kushandura, rokushandura bhaa yaita chando, uye vanogutsikana usaora rakashandurwa…
Chinhu bedzi inoshanda, ndiyo Chinyorwa shanduro…
Mbudzi 4, 2011 pa 8:01 pm
Maita zvakapesana zvaunofanira kuita, zvisinei – uchiri pakushandura asi Google kuwana oma panogumira.
1. Manual shanduro
2. Ona mazano angu pamusoro Twitter (Temp mhinduro)
4. Kumirira kusunungurwa iyo anogadziriswa ichi kuuya
Mbudzi 4, 2011 pa 8:05 pm
zvinobvira kudzorera dzakamboitika shanduro iyoyo?
Ndakaverenga plugin arun chikamu kuti ndine kukumbira kwamuri, kushandisa kiyi yangu pachake…
Mbudzi 4, 2011 pa 8:16 pm
Rokudzorera chete kudzorera asiri muchina rokushandura, unogona andibate zvakananga
Mbudzi 5, 2011 pa 10:13 ndiri
Ungakwanisa ndapota kupa ruzivo apo itsva shanduro plugin wako achava kuwanikwa.
Pari Bing uye Google ane maitiro uye shanduro havasi kushanda.
Kubva 1st December Google ichapa chete akabhadhara shanduro basa. Zvichaita plugin yako kubvumira kurishandisa?
Mbudzi 5, 2011 pa 10:45 ndiri
Shanduro itsva ichange ichiwanikwa nokukurumidza, pamberi Google wava.
Bing ari atoita kuti svn, Google parumananzombe achava nokukurumidza.
Pane tweaks kuti dzinoita zvose kushanda magetsi Version.
The Google akabhadhara API ichava kuwanikwa chete kana munhu anopa ini ane kiyi kunovhenekwa, Google Marshal zvimwe kugadzirisa nyaya vamwe vose.
Ndinovimba mibvunzo yenyu inopindurwa.